ယူအက်စ် တပ်ရင်း ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းသွားပြီး အစိုးရက ၀ န်ဆောင် ခများလျှော့ချရန် တောင်းဆို ခဲ့သည် - Pandaily
ယူအက်စ် တပ်ရင်း ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းသွားပြီး အစိုးရက ၀ န်ဆောင် ခများလျှော့ချရန် တောင်းဆို ခဲ့သည်
Feb 18, 2022, 19:37ညနေ 2022/02/18 23:04:55 Pandaily
တရုတ် အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကော်မရှင်သောကြာ နေ့တွင် အခြား ဌာန များက သူတို့ ၏စီးပွားရေး ကုန်ကျစရိတ် ကိုလျှော့ချ ရန်အတွက် စားသောက်ဆိုင် ကုန်ကျစရိတ် ကိုလျှော့ချရန် ပို့ဆောင်ရေး ပလက်ဖောင်း များ လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်ချက် အသစ်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏ “အစည်းအဝေး နှစ်ခု” အစည်းအဝေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ လုံးဆိုင်ရာ စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် သည် ထုတ်ယူ သည့် ပလက်ဖောင်း များအတွက် အခကြေးငွေ လျှော့ချရန် အဆိုပြုချက်ကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ စားသောက် ဆို င်သည် ဖြန့်ဖြူး ခ ၏ ၁၀-၁၅% ကိုလက်ခံ နိုင်သည်ဟု အစီအ စဉ်က အဆိုပြုထားသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် လည်ပတ် မှုတွင် အမှတ်တံဆိပ် ၏ လွှမ်းမိုးမှု အကန့်အသတ်ရှိသော အသေးစား စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီများသည် ၁၈-၂၀% အထိ ကော်မရှင် ရှိသည်။
စာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် Meituan ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၈၈ သို့ ၁၄. ၈၆% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း စျေးကွက် တန်ဖိုးမှာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁. ၁၅ ထရီလီယံ ဖြစ်သည်။ ယခင် နေ့က ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံ ကျဆင်းခဲ့သည်။
အလှအပ အဖွဲ့ အတွက် အစားအစာ ပို့ဆောင် ခြင်းသည် ၀ င်ငွေ ၏အဓိက အရင်းအမြစ် ဖြစ်သည်။ ၎င်း ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် အစားအစာ ထုတ်ယူ သည့် လုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၂၆. ၄၈ ဘီလီယံ ရှိပြီး ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း ဝ င်ငွေ၏ ၅၄. ၃% ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် Meituan ၏ အစားအစာ ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း အတွက် ကော်မရှင် ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၂၃. ၂၂ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ လေး ပုံ တ ပုံ အတွင်း ပြီးစီး ခဲ့သည့် အမှာစာ အရေအတွက်မှာ ၄. ၀၁ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှ ကော်မရှင် ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၅. ၇ ၈၇ ဖြစ်သည်။
အြန္လိုင္း အစားအေသာက္ ပို႔ေဆာင္ေရး ပလက္ ေဖာင္း မ်ားကိုလည္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသ မ်ားရွိ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားကို ေစ်း သက္သာ စြာ ေပးေခ် ရန္
အများပြည်သူ အတွက် ဘဏ္ guarantee ာရေး အာမခံ အဖွဲ့အစည်း များအား အရည်အချင်းပြည့်မီ သော အသေးစားနှင့်အလတ်စား စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီ များ၊ အထူးသဖြင့် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကပ် ရောဂါ ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာ သူများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ ရန် တိုက်တွန်း ပါ။
Nucleic acid စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာရွက်စာတမ်း က ခြွင်းချက် ရှိသော စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီများသည် ၀ န်ထမ်းများအတွက် ပုံမှန် nucleic acid စစ်ဆေးခြင်းကို အခမဲ့ ပြုလုပ် ရန်နှင့် ထောက်ပံ့ မှုများ ပေးရန် တိုက်တွန်း ထားသည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် အခြေခံအားဖြင့် စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီ များမှ ပုံမှန် ၀ န်ထမ်းများ၏ nucleic acid စစ်ဆေး မှုအတွက် ၅၀% ထက်မနည်း သော ထောက်ပံ့ငွေ ကိုပေး လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Starbucks သည် US Troupe နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၀ န်ဆောင်မှု ကိုတိုးချဲ့ သည်
Meituan ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ကတည်းက အနိမ့်ဆုံး သို့ကျဆင်းသွားသည်။ ယနေ့တွင် Meituan တည်ထောင်သူ Wang Xing ၏ မွေးနေ့ ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်သံရုံးက တနင်္လာနေ့မှာ Q2 Choi ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ျပည္နယ္ေစ်းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕က ေန႔ခ်င္းၿပီး ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သံအဖြဲ႕ကလည္း အဆိုပါကိစၥအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ၀ယ္ယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
Industry Aug 30 ဩဂုတ် 31, 2021